Isicwebezelisi seGibhithe “Saqqara”: ngonyaka we-1898, sathola ethuneni eSaqqara eGibhithe, into enamaphiko yangeminyaka engama-2000 BC. I-JC "Njengoba izindiza zazingekho eGibhithe lasendulo, kwafakwa ohlwini njengezithombe zezinyoni zokhuni futhi zahlukaniswa ngaphansi kuka-n ° 6347 (kumnyango wamathoyizi) ezingaphansi komnyuziyamu waseCairo"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 4, 2020 04: 04 Awekho amazwana
Kwaqhubeka kungaziwa kuze kube ngu-1969, lapho uDkt Khalil Messiha owayefunda amamodeli amaGibhithe asendulo, ethakazelwa yile nyoni eyinqaba. Qhathanisa ukwakheka kwama-aerodynamic ...	Funda kabanzi
Umsuka wesakramente lokubhabhadiswa umsuka wase-Afrika ongewona owase-Europe, njengoba uholelwa ekukholweni: ukubaluleka kwamanzi kwabaseGibhithe lasendulo abamnyama kanye nabantu abamnyama base-Afrika
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 28, 2020 03: 03 Awekho amazwana
Ukuhlanzwa kophara ngamanzi Amanzi, into eyaziwa njengebalulekile empilweni, ibisivele ibaluleke kakhulu kwabaseGibhithe. Eqinisweni, yayisetshenziselwa ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 27, 2020 12: 12 Awekho amazwana
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 20, 2020 05: 55 Awekho amazwana
Zi-compact, ezizimele, azidingi ukunakekelwa isikhathi eside futhi zizotholakala zisebenza kakhulu futhi zilusizo ngezinhloso ezahlukahlukene, ezifana ne-telegraphy engenazintambo ne-telephony, ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 16, 2020 05: 20 Awekho amazwana
Amakhanda abaNsundu / abaNsundu: ISumer neKemet bake baba izimpucuko ezinkulu ezimbili ezixhumene namadlozi afanayo, kuleli cala; abakwa-Anu, ukuthi noma ngabe kamuva abahlaseli abangama-Aryan (i-Alba) bazozihlukanisa ngokwakha iziqu zabo, ubunkulunkulu babo, izilimi zabo, amasiko abo, izincwadi zabo, amagama abo nangokumemezela njengenjwayelo ukuthi lezi zimpucuko bekungezabo
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 16, 2020 03: 03 Awekho amazwana
Njengoba benzile eKemet (Umhlaba omnyama), ezweni laseHind (Hind = Black) ngegama elithi "Aryans" elisho ukuthi "Noble", njengakuqala eSumer (amakhanda amnyama). Ngalesi sikhathi ...	Funda kabanzi